Unokwenza njani kwi-Amazon yomkhiqizo wophando njengomthengisi wexesha elikhulu?
Wonke umthengisi we-intanethi ngokubanzi uyazi indlela yokukhangela kwi-Amazon product search. Into yokuba akukho nenye indlela yokusinda ngaphaya nje ngokuba ngumthengisi osebenzayo, ngaphandle kokuba wenza okusemgangathweni ukuphucula izikhundla zakho zemveliso ekufuneni ukwenzela ukuba inani elikhulayo labantu liza kulibona. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ngokutshintsha rhoqo i-A9 yokusesha indawo ye-algorithm, indawo ye-marketplace yakwa-Amazon ifuna ukuba uhlale ulungelelanisa into entsha. Nangona kunjalo, kukho indlela eqinisekisiweyo enokukunceda uqonde indlela yokubeka uphando kwi-Amazon product search ukuze izinto zakho ezinikezelwe ukuthengiswa ngaphaya kwazo ziya kubonwa rhoqo kwingxenye yengonyama yabathengi bakho abajoliswe kuyo. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokugqiba umsebenzi ongcono kakhulu - hastane forması.
Indlela yokubeka kwi-Amazon Product Search
Ngaphambi kwayo nayiphi na into, kuya kufuneka uchonge isethi ephezulu yamagama akwii-key key. Ukugqiba loo msebenzi, ndincoma ukusebenzisa i-Keyword Planner, ithuluzi lokuphangela igama elingundoqo elingagqibekanga yi-Google efumanekayo ekufikeleleni okuvulelekileyo. Ngokukrakra, lo mncedisi omdala we-intanethi yinqalo enkulu yokuqala ukuba uqale uhlalutye amagama akho akwiihloko eziphambili kunye neentsholongwane zokukhangela umsila.Xa sekuphelile, kuya kufuneka uhlaziye uluhlu lwakho olubanzi kwilisti elincinci lokutshekisha eliqulethe kuphela amagama-magama afunekayo. Ewe, kunokuba kubonakale kunzima kwaye kusebenze ixesha, kodwa ngenhlanhla kukho izixhobo ezininzi ezahlukileyo ezilungiselelwe ngokucokisekileyo ukuphanda ngegama eliphambili kwi-Amazon.
Nanku apho ungakhetha khona: i-Sellics (eyona nto ifanelekileyo kwizigaba zokuqala zophando lwegama le-Amazon), uSonar (okulungileyo ekufumaneni zonke izinto ezibalulekileyo ezifunekayo ukubeka umgangatho wemveliso yakho), i-LSI Graph (isixhobo samahhala, Kunceda kakhulu ukuqonda indlela yokwenza ukukhangela kwi-Amazon product search - ngegama elizenzekelayo eliveliswe ngokuzenzekelayo kwintengiso yempahla okanye into enomntu oyithengayo ngaphaya kwayo), uMoz (inkonzo yokuqala yokwenziwa kwenjini yokukhangela eyenzelwe ngokubaluleka ngqo ukulungiswa kwamagama angundoqo), i-Thesaurus (ewe, ngokungathí sina, iphakathi kwezona zixhobo eziphandle kakhulu zophando ngegama elingundoqo, ngokukodwa kwi-Amazon - ngoko kutheni ungayisebenzisi ukuba uphumelele ukhuphiswano lwakho, kunjalo?).
Nantsi ezinye iindlela zokusetyenziswa-ezibonakalisiweyo kunye nenkcazo ebonakalayo ukubeka kakuhle kwi-Amazon product search, nangona usengumqhubi we-intanethi ngaphandle kokuthengisa ngokokuqala ngqa:
Unganqikazi ukunikela izaphulelo okanye ezinye iziganeko ezimangalisa ngokwenene - yindlela ekhohlakeleyo yokuphucula ukuguqulwa kwemveliso yakho ekuqaleni.
Qinisekisa ukuba unika ukwaneliseka kubaxumi bakho (gcina ukujonga ukulinganisa kwakho kweNkwenkwezi kunye neNqanaba leMatyala eMahla).
Gcina ukufumaneka kwempahla ekhoyo.
Nangona kunzima ukuyilawula ngokupheleleyo, ndiyincoma kakhulu ukukhokha ingqwalasela ngokuchanekileyo kwi-Rate Out Exit Rate. Iimetrikhi ezibaluleke kakhulu, ngokukodwa xa kuziwa ukulinganisa umgangatho wemveliso kwi-intetho ye-Amazon.